Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa maanta baahiyey qoraalka wada sheekeysi taleefon oo dhex-maray madaxweynah Donald Trump iyo dhiggiisa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky, 25-kii July.
Qoraalka ayaa xaqiijiyey in Trump uu Zelensky weydiistay inuu baaro mucaaradkiisa siyaasadeed, Joe Biden.
Go’aanka maanta lagu sii daayey qoraalka ayaa yimid maalin kadib markii dimoqraadiga ay ka faa’iideysteen eedeymahan xasaasiga ah, si ay u billaabaan baaris rasmi ah oo hoggaamin karta in Trump xilka laga xayuuibiyo.
“Waxaa jira warar badan oo ku saabsan wiilka Biden, oo ah in Biden uu joojiyey in dacwad lagu soo oogo, waxaana dad badan ay doonayaan inay ogaadaan arrintaas, sidaas darteed wax kasta oo aad la qaban karto xeer-ilaaliyaha qaranka, way wanaagsan lahayd” ayuu Trump ku yiri Volodymyr Zelensky.
Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Obama, ayaa Biden iyo hoggaamiyayaasha kale ee Reer Galbeedka, waxay Ukraine ku cadaadiyeen inay cayriso dacwad-oogaha sare ee dalkaas, Viktor Shokin, sababta oo ah waxaa loo arkay nin aan ku adkeyn la-dagaalanka musuq-maasuqa.
“Biden wuxuu ku faanayey inuu joojiyey dacwad soo oogista, sidaas darteed haddii aad bal eegi karto, waxay iila muuqataa arrin aad u xun” ayuu yiri Trump.
Dokumenti ka kooban shan bog -- oo ah nuxurka guud ee wicitaanka, balse aan ahayn wada-hadalkii oo dhan oo eray-ka-eray ah – ayaa la baahiyey xilli Trump uu iska diyaarinayo inuu Zelensky kula doc kulmo Kulanka Guud ee QM ee New York.